ပရိသတ်တွေကြားပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကောလဟာလသသတင်းအမှားတွေရှိနေတဲ့ကြားထဲကနေ ပြည်သူတွေအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ဝေဠုကျော် – Cele Top Stars
ပရိသတ်ကြီးရေ.. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သလို ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားဝေဠုကျော်ကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်း ရှိနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလည်း လိုအပ်ပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် နေ့တိုင်းလို လို လှူဒါန်းမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေကာ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ဝေဠုကျော်ကတော့ ပရိသတ်တွေကြားပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကောလဟာလသတင်းအမှားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြန်လည်ဖြေ ရှင်းပြောပြထားသလို စိတ်အနှောက်အယှက်တွေရှိနေတဲ့ကြားက ပြည်သူတွေအတွက်လှူဒါန်းမှုတွေ မပျက်မကွက်ပြုလုပ်ပြင်ဆင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။ဒီကနေ့ သင်္ကအြကျနေ့မှာလည်း စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်လံ ပေး ဝေလှူဒါန်းပြီး နောက်နေ့တွေအတွက်လည်း အပင်ပန်းခံကာ ပြင်ဆင်ထုတ် ပိုးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
“14-4-2021နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကာလ မှာ နွမ်းပါးပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန် လိုက်လှူပေးတာ မိသားစု ၁၅၀၀အထိ လှူပေးပြီးပါပြီ။မိသားစု ၂၀၀၀ အထိ အလှူရှင် ရရှိထားပါတယ်။မိသားစု ၃၀၀၀ အထိ အလှူရဖို့ ကြိုးစားရှာရပါဦးမယ်သြက်န်ကာလ အတွင်းလည်း စားသောက်ရေးအဆင်ပြေဖို့နေ့စဉ် လိုက်လှူပေးနေပါတယ်။ကိုဝေဠုလည်း သင်္ကြန်တွင်းနေ့စဉ်အလှူရှိ နေ တာတောင် ကောလဟာလတွေ သတင်းမှားတွေ လိုက်ဖြန့်နေတဲ့သူတွေက ရှိနေပါသေး တယ်။
သင်္ကြန်ဘယ်ခရီးမှ မသွားပါဖူး။ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။အလှူပို့စ်တိုင်းမှာ သူ့ပုံကို ထိပ်ဆုံးကတင် ထားပါတယ်။ဝေဠုကျော်ဖောင် ဒေး ရှင်း 09455500010(K pay)(U Soe Thein)0945550001409776089484(Wave). .” ဆိုပြီးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ ကနေ ရေးသားပြောပြထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတျကွီးရေ.. မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲက တဈဦးအပါအဝငျဖွဈသလို ပရဟိတအလုပျတှကေိုလညျး လုပျဆောငျနတေဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသားဝဠေုကြျောကတော့ ပွညျသူတှနေဲ့တဈသားတညျး ရှိနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ..။လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေမှောလညျး လိုအပျပွီး အခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ကွေရတဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ နတေို့ငျးလို လို လှူဒါနျးမှုတှဆေကျတိုကျပွုလုပျနကော အားဖွညျ့ပါဝငျနတောလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
ဝဠေုကြျောကတော့ ပရိသတျတှကွေားပွနျ့နှံ့နတေဲ့ ကောလဟာလသတငျးအမှားတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မဟုတျတဲ့အကွောငျးပွနျလညျဖွေ ရှငျးပွောပွထားသလို စိတျအနှောကျအယှကျတှရှေိနတေဲ့ကွားက ပွညျသူတှအေတှကျလှူဒါနျးမှုတှေ မပကျြမကှကျပွုလုပျပွငျဆငျနတော တှရေ့ပါတယျ..။ဒီကနေ့ သင်ျကအွကနြမှေ့ာလညျး စားဝတျနရေေးခကျခဲနတေဲ့ပွညျသူတှအေတှကျ စားသောကျကုနျတှေ ကိုယျတိုငျကိုယျကလြိုကျလံ ပေး ဝလှေူဒါနျးပွီး နောကျနတှေ့အေတှကျလညျး အပငျပနျးခံကာ ပွငျဆငျထုတျ ပိုးနတော ဖွဈပါတယျ..။
“14-4-2021နိုငျငံရေးအကွပျအတညျးကာလ မှာ နှမျးပါးပွညျသူတှအေတှကျ စားသောကျကုနျ လိုကျလှူပေးတာ မိသားစု ၁၅ဝဝအထိ လှူပေးပွီးပါပွီ။မိသားစု ၂၀၀၀ အထိ အလှူရှငျ ရရှိထားပါတယျ။မိသားစု ၃၀၀၀ အထိ အလှူရဖို့ ကွိုးစားရှာရပါဦးမယျသွကျနျကာလ အတှငျးလညျး စားသောကျရေးအဆငျပွဖေို့နစေ့ဉျ လိုကျလှူပေးနပေါတယျ။ကိုဝဠေုလညျး သင်ျကွနျတှငျးနစေ့ဉျအလှူရှိ နေ တာတောငျ ကောလဟာလတှေ သတငျးမှားတှေ လိုကျဖွနျ့နတေဲ့သူတှကေ ရှိနပေါသေး တယျ။
သင်ျကွနျဘယျခရီးမှ မသှားပါဖူး။ရနျကုနျမှာပဲ ရှိနပေါတယျ။အလှူပို့ဈတိုငျးမှာ သူ့ပုံကို ထိပျဆုံးကတငျ ထားပါတယျ။ဝဠေုကြျောဖောငျ ဒေး ရှငျး 09455500010(K pay)(U Soe Thein)0945550001409776089484(Wave). .” ဆိုပွီးဖောငျဒေးရှငျးရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာ ကနေ ရေးသားပွောပွထားတာဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေလညျး အားပေးထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
ဒီနေ့ညနေ (၅) နာရီခန့်က ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်